China YASKAWA robot brik stacking ngwaahịa na ngwaahịa | Onye na-eme brik
Na 2008, BricMaker jigidere usoro teknụzụ, batara Germany SEW gear motors, motors motors, Japan SMC pneumatic components, Italy Magodi synchronous belt, ụwa tozuru oke Robot nke FANUC, YASKAWA, KAWASAKI, KUKA na Germany Siemens PLC bulk electronic integrated usoro, banyere oge nke igwe akpaka ọgụgụ isi.
Anyị guzobere otu ọkachamara pụrụ iche maka akpaka tingcha-Nchikota-ackkwado usoro R&D. Robot dị ka igwe kachasị mma, iji kwe nkwa ụlọ ọrụ teknụzụ a dị elu, anyị webatara robot si Japan na Germany, ụdị ha bụ YASKAWA na KUKA. Dị ka mmepe nke ahịa ụlọ nke mbụ, nchịkọta robot ghọrọ ihe a na-ewu ewu. Ebe ọ bụ na uru ya nke mgbanwe, ntụkwasị obi, ịdị mfe ma nwee mmasị site na ọtụtụ ndị na-emepụta brik.
PC / oge
Oge / h
a) Mgbanwe: obere ebe ọrụ, ma enweghị mmachi mpaghara. Ihe na-agbanwe agbanwe maka mgbanwe nrụpụta brik ochie nke mgbanaka akpaka robot.
b) Oru oma: 4 ruo 6 ugboro kwa nkeji maka ịkwado brik na ịkwaga ya. Na oge obula ichota ikike site na 84 rue 144 PC brik, chekwaa ike aka.
c) Anụ: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọzọ achọrọ iji nọgide na-enwe, obere ule. Speedgba ọsọ ọsọ siri ike, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị nsogbu maka ogologo oge, n'adịghị ka billet koodu ntuziaka nke ihe dị iche iche ga-egbochi.
d) Edo: Thekpụrụ nchịkọta nke robot stacking blanks dị nnọọ mma na edo, njehie ahụ nwere ike ịbụ ihe karịrị 1mm, na ihe gbasara nke puru iche nke blanking dị oke ala.
Oge Mbuga Ozi Dbọchị 45
Akwụkwọ nke sitere Japan
Nke gara aga: JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder
Osote: KAWASAKI Robot Brick Stacking